Uyisebenzisa kanjani i-Canva: yintoni kunye nendlela yokuyila nge-Canva | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Indlela yokusebenzisa i-Canva: fumana ukuba yintoni kunye nendlela yokuyila nge-Canva
Lola ifani | 19/02/2021 13:54 | Izixhobo zoYilo, Izibonelelo
I-Canva sisixhobo esimangalisayo sokuyila, kulula kakhulu ukusisebenzisa kwaye siyakuvumela ukuba ufumane iziphumo zobungcali, nokuba awunawo amava amaninzi. Kule posi ndiza kukubonisa indlela yokusebenzisa i-Canva ukusuka ekuqaleni ke ungaqala ukonwabela bonke oovimba abazinikezelayo.
1 Yintoni iCanva?
2 Apho unokufumana khona itemplate zeCanva
3 Ezona template zintle zeCanon
3.1 Izikhokelo zokuzisebenzisa
3.2 Iitemplate zemidiya yoluntu
3.3 Izikhokelo zeshishini
4 Ibhanki yemifanekiso, iividiyo, ii icon kunye nemifanekiso
4.1 Iividiyo kunye nemifanekiso
4.2 Iifayile kunye neempembelelo
4.3 Imilo, ii icon kunye nemifanekiso
5 Iitshathi ezikhoyo kwi-Canva
6 Iifonti zochwethezo kunye neephalethi zemibala
7 Eminye imibuzo eqhelekileyo malunga neCanva
7.1 Ndingayenza njani iakhawunti yam kwiCanva?
7.2 Ngaba kungcono ukusebenza kunye neetemplate okanye ukusuka ekuqaleni?
7.3 Ndingazigcina njani zoyilo zam?
I-Canva yi isixhobo esikwi-Intanethi kuyilo iziqwenga zomxholo, sisixhobo sasimahla Kodwa ikwabonelela ngohlobo lwe-Pro, ukuba uhlawula umrhumo malunga ne-9 euro ngenyanga. Nangona izibonelelo ezinikezelwa ngohlobo lwasimahla zanele kwaye unokwenza izinto ezininzi.
Elinye lamanqaku amahle esi sixhobo kukuba ukongeza kwiWebhu, inenguqulo yeapps ye-IOS kunye ne-Android, ukuze ukwazi ukufikelela kwaye uhlele uyilo lwakho kwikhompyuter yakho nakwifowuni yakho ephathekayo.
Yiyo Isixhobo esifanelekileyo sokwenza umxholo wenethiwekhi yakho yokuncokolaNokuba unephrofayili yeshishini okanye ziinethiwekhi zobuqu. Kodwa ikwasisixhobo esilungileyo sokwenza umxholo odumileyo, njenge-infographics okanye intetho.
Apho unokufumana khona itemplate zeCanva
Zizona zixhobo ezinamandla kunazo zonke kwi-Canva. Zombini usetyenziso kunye nakwiwebhu, uya kufumana inani elingenasiphelo leetemplate baya kukuvumela ukuvelisa umxholo ngokukhawuleza okukhulu, kuba kuya kufuneka ukhethe enye kwaye ubeke imifanekiso kunye neetekisi endaweni yakho.
Ukwenza itemplate ibenokuziqhelanisa ngcono nomxholo wakho, unokuhlala uguqula izinto ezithile kunye nemibala yoyilo.
Ezona template zintle zeCanon
Inkqubo ye- itemplate ekuvumela ukuba wenze i-resume enomtsalane ehlengahlengiswe kwiimfuno zakho. Kwi-Canva une-CV yoyilo lwazo zonke izimbo kunye nemibala, ukuze isindululo esihlala sisenza ukulungelelanisa uyilo lweCV yakho kulo msebenzi ufaka isicelo kwesi sixhobo unokuyeka ukuba liphupha elibi.
Uyilo oluncinci kunye noyilo olucekeceke ngakumbi. Khumbula ukuba iitemplate zinokuhlelwa ukuba awuqinisekanga ngombala, umzekelo, kodwa ukuba uyilo, ungasitshintsha rhoqo.
Esinye isixhobo endisisebenzisa kakhulu yile itemplate yokwenza Izicwangciso kunye neekhalenda. Ungenza ngokwezifiso kwaye sisixhobo esihle sokucwangcisa iveki yakho, inyanga yakho okanye usuku lwakho.
Iitemplate zemidiya yoluntu
Kwiinethiwekhi zentlalo unazo zonke iintlobo zeetemplate, Unokwenza ukusuka amabali Ukubetha okungaphezulu kwe-Instagram kwizithuba zokondla, iposti ye-Facebook okanye iividiyo zeTikTok kunye neReels. Kunika umdla, njengobutyebi, itemplate ebonelelweyo yokwenza iithonjana zevidiyo zeYouTube okanye itemplate eyilelwe ukuvelisa amandla okuthatha inxaxheba kuthungelwano lwentlalo kunye nophando.
Into elungileyo kukuba, umzekelo, wenza umxholo wakho ifidi ukusuka kwi-instagram, Nge Canva unokuqinisekisa ukuba ugcina ukuvumelana kunye nesitayile kuzo zonke iimpapasho zakho. Ukuba uyakholelwa kuyo yonke ifidi Kwolu xwebhu lunye, uya kuba nakho ukubona ukuba iziqwenga ziziphatha njani ngokudibeneyo kwaye uya kuba nakho ukusebenzisa iphalethi yombala ofanayo kuzo zonke.
ICanva yile Isixhobo esisebenza ngokugqibeleleyo kwindawo yempangelo, Iyavumela yenza umxholo wobungcali. Kwishishini lemihla ngemihla, iitemplate ze yenza iintetho Zibalulekile, zikuvumela ukuba wenze uyilo lobugcisa kunye nomtsalane oya kuhamba kunye nokongeza ixabiso kwimiboniso yakho.
Kwimicimbi yesazisi sokubonakalayo, I-Canva yinkqubo egqibeleleyo yabaqalayo abafuna umgangatho. Unetemplate kuye logo yoyilo, into esisiseko kwincwadana ye- ukubonwa kwayo nayiphi na into.
Ibhanki yemifanekiso, iividiyo, ii icon kunye nemifanekiso
I-Canva ngesixhobo esipheleleyo. Ngaphakathi kwiwebhu, unebhanki eyakhelwe-ngaphakathi yemifanekiso, iividiyo kunye nezixhobo ezibonakalayo, ukuze ubandakanye iifoto zesitokhwe, iividiyo, iimilo, ii icon kunye nemifanekiso, awuyi kunyanzeleka ukuba uphume kwinkqubo, nangona kucacile, unako, ikwavumela ukuba ulayishe izixhobo zangaphandle.
Iividiyo kunye nemifanekiso
Ukuba uqaphela, ezinye izixhobo zixhomekeke kubhaliso lwe-pro, kodwa kunjalo, unezixhobo ezaneleyo zasimahla zokwenza uyilo lwakho lubonakale ngakumbi kwaye lube nomtsalane.
Ukongeza iifoto neevidiyo ungacinezela ngqo kwaye ivele embindini wetemplate, okanye ungabarhuqa ukuyibeka kwizakhelo zemifanekiso esele zenziwe. Ukwenza ubungakanani kwakhona kunye nokuguqula isityalo somfanekiso kuya kufuneka ucofe kabini kuso kwaye usishukumisele kude kube kukuthanda kwakho.
Iifayile kunye neempembelelo
Ngaphakathi kwe-Canva, ungasebenzisa iifilitha kunye nefuthe kwimifanekiso ukukunceda utshatise isitayile seefoto zakho.
Imilo, ii icon kunye nemifanekiso
Zifakwe ngokufanayo nemifanekiso, banomdla kakhulu ukubonelela ngolwazi olongezelelweyo kumxholo ukomeleza izimvo, kodwa ukongeza izinto zokuhombisa Uyilo lwakho.
Kwicandelo lezinto, unokongeza iifreyimu zemifanekiso apho unokongeza umxholo kamva. Iluncedo kakhulu ekwenzeni iitemplate zakho.
Iitshathi ezikhoyo kwi-Canva
Ukusuka kwiphaneli yezinto ungongeza imifanekiso elula kumaxwebhu akho e-Canva. Unemodeli ezininzi ezikhoyo: ibha, umgca, isetyhula, ukusasazeka ...
Ungawahlela kwaye ufake idatha ngokuthe ngqo kwi-Canva, xa ubangenisa kwiphepha, ispredishithi esincinci siza kuvula kwicala lasekhohlo lenkqubo ukuze wenze njalo.
Iifonti zochwethezo kunye neephalethi zemibala
I-Canva ikunika iintlobo ngeentlobo zemibala ebhalwe ngombala kunye neendawo zokubhalela ukuze ukhethe eyona ilungileyo kuyilo ngalunye. Ukufikelela kuzo kuya kwipaneli esecaleni, kwiqhosha «ngaphezulu»> «izitayile».
Ukuba uza kuyila uxwebhu olungenanto kwaye awuyi kusebenzisa nayiphi na itemplate, Iiphalethi zemibala ye-Canva zikunceda ukuba ukhethe umbala ohambelana. Kwakhona, xa ufaka umfanekiso, umbala wombala waloo foto uyavela ngokhetho lwemibala, ukuze ukhethe iifoto ngepeyinti efanayo okanye unike loo mibala kwizinto ezahlukeneyo zoxwebhu.
Ngokubhekisele kwifonti yokuthayipha, eyona nto inomdla kukuba ayikuniki kuphela ukufikelela kwindidi enkulu, bakunikezela ngezimvo zohlobo lwendibaniselwano ekhohlakeleyo.
Eminye imibuzo eqhelekileyo malunga neCanva
Ndingayenza njani iakhawunti yam kwiCanva?
Ukwenza iakhawunti entsha kwi-Canva, Kufuneka ungene kwiwebhu kwaye ucofe ku «bhalisa» (ngasekunene, phezulu kwesikrini).
Iya kukunika ithuba lokuba ubhalise kwiakhawunti yakho kaGoogle, uFacebook okanye nge-imeyile. Khetha ukhetho lwakho olukhethiweyo kwaye ukulungele ukuqala ukonwabela i-Canva.
Ngaba kungcono ukusebenza kunye neetemplate okanye ukusuka ekuqaleni?
Kuyaxhomekeka, Kuxhomekeka ekubeni uyilo luyacaca kangakanani, ixesha ofuna ukulinikezela kunye namava akho. Uhlala unokhetho lokuyila uxwebhu olungenanto, unokwenza iziqwenga ezinkulu ukuqala ekuqaleni. Kodwa oko akuthethi ukuba kungaphantsi kobuchwephesha ukusebenza kunye neetemplate, iitemplate sisixhobo esikhulu, esigcina ixesha kwaye zilapho ukuze uzisebenzise.
Ndingazigcina njani zoyilo zam?
Ungaphambuki ujonge iqhosha lokugcina utshintsho lwakho kwi-Canva, kuba esi sixhobo sigcina ngokuzenzekelayo njengoko uhlela uxwebhu.
Ewe Unokuzikhuphelela uyilo kwikhompyuter yakho ngokucinezela iqhosha u "khuphela" kwicala lasekunene lesikrini Ungagcina neenkcazo-ntetho zakho njengefayile yePowerPoint!
Okokugqibela, khumbula loo nto I-Canva isebenza njengefu. Ungafikelela kuyilo lwakho nakwesiphi na isixhobo ongena kuso Ufuna kuphela uqhagamshelo lwe-intanethi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Indlela yokusebenzisa i-Canva: fumana ukuba yintoni kunye nendlela yokuyila nge-Canva
Zithini iiseva zensimbi ezingenanto?
Uyenza njani intetho ngePowerPoint